Igbo, John: Lesson 129 - Amụma banyere ọdịnihu nke Jizọs (Jọn 21:20-23) | Waters of Life
Home – Igbo – John - 129 (Future predictions)
c) Amụma banyere ọdịnihu nke Jizọs (Jọn 21:20-23)
20 Pita we chigharia, hu onye nēso uzọ-Ya n'azu. Onye a bụ onye na-eso ụzọ Jizos nke ji ezi obi hụ ya n'anya, onye tinyekwara obi n'obi Jizọs n'anyasị ahụ ma jụọ, "Onyenwe anyị, ònye ga-arara gị nye?" 21 Pita hụrụ ya, sị Jizọs, "Onyenwe anyị, gịnị banyere Nwoke a? 22 Jizos siri ya, Ọ buru na anamachọ ka ọ nọgide rue mb͕e m'gābia, gini ka i nēme? Ị na-eso m."
Pita ṅara ntị n'olu Nna-ukwu ya ka ọ na-azụ atụrụ na atụrụ ya. Ebe ọ bụ na Jọn bụ onye ikpeazụ nke ndị na-eso ụzọ, Pita nwere nchegbu ịchọta ihe Jizọs mere banyere Jọn. Ndi enye ayada enye afiak ke ufọk ke ini enye ekedide eyenọwọn̄, mmê ndida enye ọbọn̄ ke ukpụhọde?
O nwere ike ịbụ na Pita nwere anyaụfụ n'okwu Pita, n'ihi na Jizọs yiri ka Jọn họọrọ ndị ọzọ, ma hụkwuo ya n'anya. Na Nri Anyasị Ikpeazụ, Pita gwara John ka ọ bụrụ onye nnọchiteanya ya na Onyenwe anyị iji mee ka ọgba aghara ahụ kwụsị ma kpọọ onye ngha.
Jọn nwere mmasị na Jizọs nke na ọ guzoro n'akụkụ obe, na-etinye ndụ ya n'ihe ize ndụ n'ihu ndị iro Kraist. Ọ bụ onye mbụ kwenyere na Onyenwe anyị bilitere, onye mbụ mara ya n'oge ịkụ azụ n'akụkụ ọdọ mmiri ahụ. Ọ nọworị na-eso Jizọs, ebe a na-akpọ Pita ka ọ soro. Obi ya dị n'otu na Kraịst. Ọ bụ ya na ndị na-eso ụzọ ya kacha mma.
Ma eleghị anya, Pita jụrụ Jizọs, ma ọ bụrụ na Jọn ga-eche ihu n'ọdịnihu dị egwu nke e buru amụma maka ya, ma ọ bụ ọ bụrụ na ọ bụ ihe dị iche iche maka ya. Jizos zaghachiri onye isi ozi ahu na emegh ya ka o buru onye nwe ya na ndi ozo, kama ka o buru nwanne n'etiti ndi nhata. Ọ bụghị ọrụ ya iche banyere ọdịnihu Jọn bụ onye ya na Onyenwe ya nwere njikọ kpọmkwem, ebe Pita bụ ọnụ na-ekwuru ndịozi. John kpuchiri ọnụ, na-akwado site na ekpere na ndidi na ozizi ndị dị na Chọọchị, ma na-emetụta ha n'ike nke ekpere (Ọrụ 3:1, 8:14; Ndi Galetia 2:9).
Anyị na-ahụ site n'oge Jizọs họpụtara maka ọrụ Jọn, na ọ dịghị mkpa, ma ànyị nọ ogologo oge n'ozi Kraịst ma ọ bụ nwụọ n'isi ụtụtụ maka ya. Ihe ka mkpa bụ ikwesị ntụkwasị obi na nrubeisi anyị mgbe niile. Jizọs adịghị emeso ndị na-eso ụzọ ya dị ka à ga-asị na ha dị n'otu, ma na-akwadebe ụzọ pụrụ iche maka onye ọ bụla iji nye Nna ya ukwu otuto. Anyị adịghị anụ ihe ọ bụla banyere ọnwụ Jọn; o nwere ike ịnwụ ọnwụ ọnwụ.
Jizos gwara Pita ka o lee ya anya ma ghara ile anya ndi ozo. Nke a pụtara na anyị ekwesịghị ikwe ka ọrụ Ndị Kraịst ndị ọzọ na-arụ ọrụ anyị, kama na anyị na-agbalịsi ike ịmata uche Chineke ná ndụ anyị, ma soro ya ozugbo n'enweghị ihe ọ bụla. Okwukwe nke na-esote bụ ụkpụrụ maka Onye Kraịst ọ bụla.
Ọ gwakwara ndị na-eso ụzọ ya banyere ọbịbịa ya nke abụọ. Ọbịbịa ahụ bụ ihe mgbaru ọsọ nke akụkọ ntolite ụwa. Echiche nke ndị niile na-eso ụzọ na-eduzi ihe omume a n'ọdịnihu. Site na ọnụnọ Chineke n'etiti ụmụ mmadụ, ọchịchọ ọgbọ nile ga-emezu. Jizọs ga-abịa n'ebube. Ị na-atụ anya ya ma kwadebe site n'ekpere, ọrụ, abụ dị nsọ na àmà gị dị nsọ? Anyị ga-ahụ ọnụnọ ya ọtụtụ ìgwè ndị kwere ekwe bụ ndị soro ya n'okwukwe n'okwukwe, ma ghara iso onye ọzọ.
Ya mere okwu a we pua n'etiti umu-nne-ya, na onye nēso uzọ a agaghi-anwu. Ma Jizos agwaghi ya na ya agagh anwu, ma, "oburu na acho m ka o nogide rue mgbe m'biara, gini ka obu gi?"
Echiche nke echiche bụ na John dịrị ndụ na nká, ọ ghọkwara ihe nnọchianya n'ime ụka nke atụmanya Mesaịa. N'anya ya, o kweere na ya agaghị anwụ, ruo mgbe Onyenwe anyị laghachiri. Paul echere kwa anya na ọbịbịa nke Onyenwe anyị ọbịbịa, na ka o wee ghara ịnwụ ma bụrụ onye gbanwere ozugbo ma bụrụ onye a kpọbatara n'eluigwe. Jon kwenyesiri ike ma gosipụta ya na nkwa Kraist ekwughị na Jọn agaghị anwụ ruo mgbe eluigwe ga-emeghe, Onye dị ebube ga-apụta. Ebumnuche ya na mkpebi ya abụghị ihe Pita chọrọ. Jehova na - anọgide na - ezi Onye Ọzụzụ Atụrụ nke na - edu ndị na - eso ụzọ ya n'otu ụzọ ya.
EKPERE: Onyenwe anyị Jizọs, ị bụ Onye nzọpụta dị ebube, onye ọzụzụ atụrụ kwesịrị ntụkwasị obi. Ekele dịrị gị maka ịduzi Pita na Jọn n'ụzọ nke kwadoro nke ọ bụla n'ime ha, ka ha wee nye gị otuto na ndụ na ọnwụ. Nye anyị ihe ùgwù nke ịgbaso naanị gị. Na-eduzi ndị ikwu anyị na ndị enyi anyị na ihe mgbaru ọsọ nke ọbịbịa gị, ka ha wee jiri obi ụtọ kwadebe maka ọbịbịa nke dị nso.
Gịnị ka okwu ikpeazụ nke Kraịst na oziọma a pụtara?
Page last modified on March 05, 2020, at 07:01 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)